သင္ အင္တာနက္စြဲေနၿပီလား | ဆန္းသစ္ျမန္မာ
Home Lifestyle Health သင် အင်တာနက်စွဲနေပြီလား
ယနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အချိန်တွေအများကြီး ကုန်ဆုံးနေရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရာမှာလည်း အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လုပ်သူ များလာတာကြောင့် အင်တာနက် စွဲနေပြီလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို သင့်ကိုယ်သင်မေးကြည့်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ဒါဆို အောက်ပါမေးခွန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလား ဆိုတာအရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
-သင်က အင်တာနက်ကို အချိန်တိုင်းလိုလို သုံးနေတာကြောင့် သင့်ကျောင်းစာ သို့မဟုတ် သင့်အလုပ်ကိုထိခိုက်နေပြီလား?
-သင်မှန်းထားတဲ့အချိန်ထက် အချိန်ကြာကြာ အွန်လိုင်းမှာ ရှိနေတတ်သလား?
-သင်ချစ်သူနဲ့အွန်လိုင်းမှာတွေ့ရတာ သင့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှား စေတယ်လို့ထင်နေသလား?
-သင်က အင်တာနက် အလွန်အကျွံ သုံးတာပဲလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောနေကြပြီလား?
-သင်အလုပ်လုပ်လက်စက မပြီးသေး၊ အီးမေးလ် စစ်တာ၊ Chat Boxစစ်တာ၊ Facebook သုံးတာတွေကိုအမြဲလုပ်မိနေသလား?
-သင်က အင်တာနက်သုံးလွန်းလို့ အလုပ်ကိစ္စတွေနှောင့်နှေးနေပြီလား?
-သင်က အင်တာနက်အတွက် အချိန်ပေးလွန်းလို့ သင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ သင့်ချစ်သူကရော စိတ်ဆိုးဖူးလား?
-မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ မိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့ထက် အင်တာနက်သုံးရင်းအချိန်ဖြုန်းဖို့ပဲ တွေးနေသလား?
-ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အင်တာနက်သုံးလို့ အိပ်ရေးတွေပျက်နေပြီလား?
ဖော်ပြပါမေးခွန်းတွေအတွက်သင့်ရဲ့အဖြေက Yesပဲဆိုရင် အင်တာနက်သုံးချိန်ကိုလျော့ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
အင်တာနက်သုံးချိန်လျော့ရန် နည်းလမ်းတွေကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကိုယ်တိုင် လေ့လာလိုက်နာဖို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သင်ရဲ့ ပုံမှန် အင်တာနက်သုံးလေ့ရှိတဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါကိုမှတ်ထားပေးပါ။ ဖုန်းလေးကိုကိုင်ပြီး အင်တာနက်သုံးနေစဉ်မှာ ဘယ်လိုခံစားရတယ် မသုံးခင်မှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲ စတာတွေကို မှတ်ထားပေးပါ။ များသောအားဖြင့်လူတွေဟာ ပူပင်သောက စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ၊ အထီးကျန်ဆန်တဲ့အခါနဲ့ ပျင်းရိတဲ့အခါတွေမှာ အင်တာနက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
(၂) ဖုန်းဆက်ပြီးပြောပါ သို့မဟုတ် Online callingသာပြောပါ
လိုင်းပေါ်ကနေ စာရိုက်ပို့နေတာထက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးပြောတာက သူငယ်ချင်းရဲ့အသံကိုကြားရပြီး မျက်နှာလေးပါမြင်နိုင်တော့ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ဒါကြောင့် အပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်းကြတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းခေါ်ပြီးပြောလိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
အီးမေးလ်စစ်ဖို့၊ ဂိမ်းဆော့ဖို့နဲ့ Facebookသုံးဖို့အတွက် တိကျတဲ့အချိန်ထားပါ-ဥပမာ တစ်နာရီ။ အချိန်ပြည့်တာနဲ့ လိုင်းပေါ်ကဆင်းပြီး လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကို ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။
(၄) အလုပ်မှာ တစ်နာရီလောက်ဖြစ်ဖြစ် Offline လုပ်ထားပါ
အလုပ်မှာ ကွန်ပျူတာ (သို့) ဖုန်းကို အလုပ်ကိစ္စအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အပျင်းပြေအတွက်သော်လည်းကောင်း အချိန်ပြည့် အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးသုံးမနေသင့်ပါဘူး။ တစ်နာရီလောက်ဖြစ်ဖြစ် Offlineလုပ်ပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေရအောင် အလုပ်မှအဖော်တွေနဲ့ အပြင်လမ်းလျောက်ထွက်တာမျိုးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ (သို့) ဖုန်းကြည့်ချိန် တစ်နာရီပြည့်လျှင် မျက်စိမှိတ်ပြီးအနားယူပါ။ ဒါမှမဟုတ် ပြတင်းပေါက်ကတစ်ဆင့်အဝေးသို့ မိနစ် အနည်းငယ် ကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်တာက ဦးနှောက်နဲ့ မျက်စိကို အနားပေးရာရောက်ပါတယ်။
(၆) အနည်းဆုံးတစ်လတွင် တစ်ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် Offlineလုပ်ထားပါ။
နိုးတဲ့အချိန်ကနေ ညအိပ်တဲ့အချိန်အထိ အင်တာနက်လုံးဝမသုံးဘူး ဆိုတဲ့ရက်တစ်ရက် တစ်လတစ်ခါထားရှိပါ။ အဲ့ဒီနေ့မှာ Email Chatting Facebook ဘာဆိုဘာမှမသုံးပါနဲ့။
လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ အီးမေးလ်ဆိုပြီးအကောင့်နှစ်ခုဖွင့်ထားပါ။ ဒါမှသာအလုပ်ကိစ္စတွေအတွက် အီးမေးလ်တွေရှိရင် စစ်ဆေးရလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်မသုံးခင်မှာ ဘာအကြောင်းကြောင့် အင်တာနက်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုထားပါ။
(၉) စွဲလမ်းစေသောSocial Appများကိုလျော့သုံးပါ။
Facebook, Viber နဲ့ Beetalk ဆိုတဲ့ Social Appတွေဟာ စွဲလမ်းစေတဲ့ Appတွေဖြစ်လို့ လုံးဝရှောင်ဖို့အခက်အခဲရှိရင် တစ်ခုလောက်သာသုံးပြီး သုံးချိန်ကိုလျော့ဖို့လိုပါတယ်။
အင်တာနက်စွဲနေကြတာဟာ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် လူတော်တော် မျာများမှာတွေနေရတဲ့ပြဿနာပါ။ အင်တာနက်စွဲနေလို့ ဆိုပြီး စိတ်မသက်မသာမဖြစ်ပါနဲ့။ ဖြည်းဖြည်းချင်း အင်တာနက်ကို ကောင်းကျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်လာပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်။
Previous article မက္ကစီကို နယ်စပ်ကို ဒေါနယ်ထရမ့် မှ တံတိုင်းကာ ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဘိလပ်မြေသွင်းရန် ပြင်ဆင်
Next article လူ(၁)သန်းကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဂျပန်က လမ်းကျွံကျမှု